Inkathazo idlala indima ebalulekileyo ekubunjweni nasekuphuhlisweni komntu ngamnye. Iingxaki zobuntwabuntala buncinci ngokubaluleka, kwaye enye yezona zinto eziphambili yinkathazo yeminyaka emithathu ekuphuhlisweni komntwana. Abaphandi abahlola iinkqubo zengqondo ngoku okanye naphakade, qaphela ukuba inxalenye ye-2 ukuya kweyimi-4 yiminyaka yeyona nto ibaluleke kakhulu, ebaluleke kakhulu kwaye ibalulekileyo ebomini bomntu. Ingongoma ebalulekileyo, okanye inkathazo, yindawo yendalo, inxaxheba ebalulekileyo yokuphuhliswa kobuntu, okukhokelela ekutshintsheni ekuphatheni nasekujongeni ihlabathi. Olu luhlobo lwesinyathelo sokutshintshela kwinqanaba lobomi obutsha, oku kuqale kwincandelo elitsha lomendo wobomi.
Inkathazo yeminyaka emithathu yinto ebaluleke kakhulu ekuphuhliseni umntwana. Ngalesi sihlandlo inkomo iqala ngokucacileyo ukuba umntu ohlukeneyo, ozimeleyo, uqala ukusebenzisa isibhengezo esithi "Mina", uzikhethele ngokwakhe. Ngeli xesha, ubudlelwane boluntu bomntwana nabantu abadala baqala ukutshintsha. Iingxaki zihlala ziyinkimbinkimbi kukuba ikhefu lokubeletha liyaqhubeka, kwaye umntwana ushiywe ngumntwana okanye uzama ukukhawuleza kwintsimi.
Abazali abaninzi bayaqaphela ukuba ngeminyaka emithathu ukuziphatha komntwana kuye kwangeke kwenzeke, akayikuthobela, uzama ukwenza yonke indlela yakhe, uthi "akukho" kuzo zonke iinyathelo, unengqiqo kwaye unokwenza umsindo.
Ifana neengxaki zeminyaka emithathu ubudala, ubukho beempawu ezithile. Iingcali zengqondo ziye zachonga imiqondiso emininzi ebonisa ukuba ubukho bentsana yakho yinkathazo yeminyaka emithathu ubudala.
Ngexesha elibuhlungu - le ngenye yezona zinto zibalaseleyo zendalo. Umntwana unenkani nangona iphi na isizathu, njengaleyo. Iinjongo zakhe eziphambili kweli xesha liyimpumelelo yezinto ezifunekayo, kwaye ayifuni. Ukuba umama wabiza umntwana ukuba adle, uya kuthi: "Andiyi kuhamba," nokuba ufuna ukudla.
Abazali, bezama ukuphakamisa umntwana othobelayo, zama ukuphinda "mqondise" naye, umyalelo, ubeke uxinzelelo kumntwana. Oku kuziphatha kakude kwindlela efanelekileyo yokuphuma kule meko. Umntwana, ezama ukulungiswa, uya kuvuselela iimeko ezinjalo, ezama ukubonisa "mna".
Ibonakala kubomnqweno womntwana ukuba enze okuchaseneyo, nangona afuna ukuthanda kwakhe. Ngamanye amaxesha abazali bayamthobeli umntwana njengongqineli. Xa umntwana engayithobeli abazali bakhe, wenza ngokuthanda kwakhe, anelise umnqweno wakhe. Ngobugwenxa, uyaphikisana naye. I-Negativism ibonakala nje kuphela kubazali kunye nabantu abasondeleyo, abangaziwayo kwamanye amazwe, umntwana othobelayo, uziphatha ngokuzenzekelayo nangokulula.
Ngamanye amaxesha ukungaboni kakuhle komntwana kubonakala kunengqondo: ubonisa ukungavumelani kwakhe kangangokuba ngokubonisa inja, uthi: "ingenja inja," okanye into enjalo kulo moya.
Umntwana uqala ukubonakalisa zonke iintlobo zokubhikisha, kungekhona kuphela kwiminqweno yakhe kunye nokuthanda kwabazali bakhe, kodwa ngokunxamnye nendlela ekhoyo yokuphila. Ubhikisha ngokumalunga nemithetho eyamkelweyo, akavumelani ukwenza izinto eziqhelekileyo (akafuni ukuzitshiza amazinyo, uhlambe).
Lo ngumnqweno wokwenza zonke izenzo kunye nokusebenza ngokuzimeleyo, nangona azinalo izakhono okanye amandla okuzifeza.
Ngokuqhelekileyo umntwana akavumelekanga ukuba enze ubuninzi bemisebenzi - oku akufanele kwenziwe, vumela umntwana ukuba azibonele ukuba ungaphezu kwamandla akhe.
Oku kubonakala kukuba umntwana, owezolo wagqiba uthando kunye nothando kubazali, abantu abasondeleyo (ootata, oogogo), namhlanje uqala ukuwabiza ngamagama ahlukileyo kunye namahlazo. Uyeka ukunqanda amathoyizi akhethandayo, uqala ukuwabiza ngamagama, kwaye ngamanye amaxesha alahle, aphule, aphule.
Ngethuba leengxaki, ukuziphatha komntwana akunakulinganiseki, ukunyanzeliswa kwaye kuqondiswe kakubi. Umonakalisi omncinci ozama ukulawula abazali bakhe ngazo zonke iindlela, ukukhusela umbono wakhe, ufuna ukuba umnqweno uyawuzaliseka. Ngomntwana, amaqhinga kunye nokuguquka kwemizwelo ebonakalayo kudla kwenzeka.
Yintoni abazali abayenzayo ngexesha leengxaki ezintathu iminyaka?
Xa kuziwa kwiinkathazo zeminyaka emithathu, oku kufuneka kuqondwe njengenguqu ekuphatheni komntwana, enokuthi ivele kwixesha eliphakathi kwe-2 ukuya kwiminyaka emine. Akukho sikhokelo esithile esithile sokubonakaliswa kweengxaki, xa umntwana efumana ulwazi olufunekayo lolwazi, xa eqala ukucinga ngokuzimela komntu kunye nokuzimisela, ukuziphatha okufanelekileyo kuya kuvela.
Kubalulekile ukuba ube nomonde, ukucinga kuphela okulungileyo. Emva koko, ukuba umntwana engadluli le ntlekele ekuphuhliseni, ubuntu bakhe abuyi kuphuhliswa ngokupheleleyo. Ukuguquka okufunekayo kubantwana kunye nebazali, abafanele batshintshe imbono yabo malunga nomntwana, baqonde ukuba ngumntu ozimeleyo kunye nomntu omdala.
Uncedo lokunciphisa ingxaki kunokunyamezela, uthando kunye nokholo kwikhono lomntwana. Kufuneka uhlale uzolile, nangona zonke iindawo zokuhlaziya kunye nokuhlaziywa komntwana. Akunamsebenzi ukubonisa okanye ukuchazela nayiphi na into kumntwana okhalayo nowamemezayo, kufuneka uhambe ekamelweni ukuba uhlala ekhaya, okanye ususe kubantu ukuba uhlala kwindawo kawonkewonke. Xa bengabikho ababukeli, umntwana uyancipha, kuba akanakho umntu onokubonisa amakhonsathi kuye.
Akuyimfuneko ukuba ube ngummeli kakhulu kwimfundo kwaye awuvumelekanga ukuba umntwana akuphathe. Namaxesha onke zama ukuvumelana, unikele umntwana ngolunye uhlobo, kunye kunye nezigqibo. Ingane yakho isele ibe ngumntu, uqala ukuqaphela oku, umzekelo wakhe ubonisa ukuba umntu okhulileyo, umntu omdala uya kuhlala esisombululo kuye nayiphi na ingxaki kunye nolwimi oluqhelekileyo. Emva kwakho konke, umsebenzi wakho womzali kukukhulela ubuntu obuvuthiweyo, obumanyanisayo, kwaye ungathobeli kwaye uzingelwa kubo bonke abantu.
Iziphumo zombala kwi-psyche
Indlela yokuxhathisa umntwana kwimikhwa emibi
Indlela yokunceda intombi yakho ibe nethemba ngakumbi
I-Shampoo ukusuka ekupheleni kwemida: zokupheka zasekhaya eziphambili
Ukupheka okulula kunye okumnandi kuMnyaka omtsha we-2017 ngesithombe sabapheki abahamba phambili - Ngaphandle kwenkukhu kunye nayo
I-yoga yomntwana ukusuka ekuzalweni ukuya kwiiveki ezisibhozo
Inkcazo epheleleyo yokutya kweJapan
Intombazana enhle ingazi njani kumfana?
Ukufudumala kunye nemfashini: ukujonga ngokubanzi iimbotyi zezingane ze-stylish 2016